नुहाउनु अघि कपालमा किन तेल लगाउनुपर्छ ? जानी राखौ कपालमा तेल लगाउँदाको फाइदा - ज्ञानविज्ञान
सुन्दर रहनको लागी अनुहारको सुन्दरतासगैं कपाल पनि आकर्षक र बलियो हुन जरुरी छ । कपाल स्वस्थ, आकर्षक र बलियो बनाउँनको लागी के गर्ने भन्ने विषयको बारेमा थुप्रै जानकारी भएपनि कुन जानकारीलाई फलो गर्ने भन्ने दुबिधा छ ।
वातावरण प्रदुषण, मानसिक पिडाकोे कारणले गर्दा कपाल पातलो हुने, कपाल झर्ने, तालु खुइलिने लगायतका समस्या देखापर्दछ ।
सर्वप्रथम त कपाललाई स्वस्थ्य राख्न र झर्न नदिनको लागी पिडाबाट मुक्त हुन सक्नुपर्दछ । बाहिरी वातावरणमा हिड्नेलाई अत्याधिक धुलो, धुवाँ र प्रदुषणले अनुहारमा झै कपालमा पनि त्यस्तै असर देखाउँछ, त्यसैले बाहिर खुल्ला ठाउँमा हिड्दा कपाललाई छोपेर हिड्नुपर्दछ ।
कपाल आकर्षक र बलियो बनाउने चाहनाले गर्दा बजारमा केमिकल मिसिएको साम्रागी प्रयोग गर्नको लागी धेरै बाध्य भएका छन्, तर यसको प्रयोगको कारणले गर्दा केहि समयपछि साइड इफेक्ट देखापर्दछ, अत यस्ता सामाग्रीको प्रयोगबाट टाढै रहनुपर्दछ । कपाल झरेर धेरैको तालु खुइलिएको छ ।
यस्तो समस्याबाट बच्नको लागी तेल लगाएर मसाज गर्नुपर्दछ । समस्या परेपछि मात्र धेरैको बानी समस्या समधान गर्ने तर्फ लाग्ने हुन्छ । पछि पछुताउनु भन्दा पहिले नै यस्तो सर्तकता अपनाएमा तपाईको कपाल बाक्लो, आकर्षक र बलियो हुनेछ ।
कपालमा तेल किन लगाउने ?
–तेल लगाउनाले कपाल चम्किलो र बलियो हुन्छ । तेल नलगाएको कपाल टुक्रिने, झर्ने आदि हुन्छ ।
–तेलमा पाइने पोषक तत्वले कपाललाई जरैदेखि बलियो बनाउँछ । उदाहरणका लागि अमलाको तेलमा पाइने भिटामिन सीले कपाललाई बलियो बनाउँछ ।
–कपालमा तेल लगाउँदा टाउकोको मसाज पनि हुन्छ । मसाज गर्दा टाउकोमा रहेका छिद्र खुल्ने, टाउकामा रक्तसञ्चार तीव्र हुने गर्छ । रक्तसञ्चार तीव्र हुँदा कपाल बलियो हुने र कपालको जरामा जम्मा भएका टक्सिन, अक्सिडेन्टजस्ता विकार बाहिर निस्कन्छन् । यसले कपाललाई चम्किलो, बलियो र स्वस्थ बनाउँछ ।
–नुहाउनुअघि नरिवल, जैतुन, तोरी, अमला आदिका तेल लगाउने गर्नाले नुहाउँदाखेरि कपाल कम झर्छ । तोरीको तेलमा ताजा अमलाको रस मिसाएर नुहाउनुभन्दा आधा घण्टाजति अघि कपालमा लगाउनाले नुहाएपछि कपाल चम्किलो हुनुका साथै नुहाइञ्जेल कम कपाल झर्छ ।
–कपालमा लगाउने तेल किन्दा बास्नादार तेल भरिसक्के छान्नु हुँदैन । बजारमा पाइने बास्नादार तेलमा अनेक थरी केमिकल मिसाइएका हुन्छन् । तिनले कपाललाई कमजोर बनाउँछन् । नरिवल, जैतुन, बदाम, तोरी, अमला आदिको तेल कपालका लागि उत्तम मानिन्छन् ।
सोचेको भन्दा बढी फाइदा
१. कपाल नुहाउनु अघि जहिल्यै पनि १ वा २ घण्टा अघि तेल लगाएर मसाज गर्ने ।
२.तेल लगाउँदा मनतातो बनाएर मात्र लगाउने ।
३. तेल लगाउँदा कपाल नरम भएन भने नरम बनाउने तेलको प्रयोग गर्ने । ४. धेरैनै सुख्खा कपाल छ भने नरिवको तेल लगाएर मजास गरी करिब ३ घण्टापछि मात्र नुहाउने ।
५. कपालमा कलर छ भने कपाल सुख्खा हुन्छ, कपाल नरम बनाउँनको लागी तोरीको वा जैतुनको तेल लगाउने । ६.जरै सम्म तेल लगाएर केहि समय मसाज गर्ने ।
यस्ता उपायको साथमा कपाल चिसोपानीले मात्र नुहाउने गर्नुहोस् । तपाईको कपाल झर्ने समस्या, रुखो हुने समस्या आउदैन् र कपाल आर्कषक र बलियो हुन्छ ।
तल हामीले कस्तो तेल लगाउने र लगाउँदा के हुन्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरेका छौँ ।
१. तेल लगाएमा कपाल चम्किलो र बलियो हुन्छ । तेल नलगाएको कपाल टुक्रिने, झर्ने आदि हुन्छ ।
२. तेलमा पाइने पोषक तत्वले कपाललाई जरैदेखि बलियो बनाउँछ । अमलाको तेलमा पाइने भिटामिन सीले कपाललाई बलियो बनाउँछ, यो एउटा उदाहरण हो ।
३. कपालमा तेल लगाउँदा टाउकोको मसाज पनि हुन्छ । मसाज गर्दा टाउकोमा रहेका छिद्र खुल्ने, टाउकामा रक्तसञ्चार तीव्र हुने गर्छ । रक्तसञ्चार तीव्र हुँदा कपाल बलियो हुने र कपालको जरामा जम्मा भएका टक्सिन, अक्सिडेन्टजस्ता विकार बाहिर निस्कन्छन् । यसले कपाललाई चम्किलो, बलियो र स्वस्थ बनाउँछ ।
४. नुहाउनुअघि नरिवल, जैतुन, तोरी, अमला आदिका तेल लगाउने गरेमा नुहाउँदाखेरि कपाल कम झर्छ । तोरीको तेलमा ताजा अमलाको रस मिसाएर नुहाउनुभन्दा आधा घण्टाजति अघि कपालमा लगाउनाले नुहाएपछि कपाल चम्किलो हुनुका साथै नुहाइञ्जेल कम कपाल झर्छ ।
५. कपालमा लगाउने तेल किन्दा बास्नादार तेल सकभर छान्नु हुँदैन । बजारमा पाइने बास्नादार तेलमा अनेक थरी केमिकल मिसाइएका हुन्छन् । तिनले कपाललाई कमजोर बनाउँछन् । नरिवल, जैतुन, बदाम, तोरी, अमला आदिको तेल कपालका लागि उत्तम मानिन्छन् ।
कस्तो कपालमा कुन तेल लगाउने ? कसरी प्रयोग गर्ने तेल ?
१) कस्तो कपालमा कुन तेल लगाउने भन्ने पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै कपालमा सबै तेलको प्रयोग फाइदाजनक हुँदैन । तेलका कारण कुनै साइड इफेक्ट नभए पनि नतिजा सकारात्मक नदिएपछि तेल लगाउनुको अर्थ नै रहँदैन । त्यसैले सुरुमा आफ्नो कपालको क्वालिटी बुझ्नुहोस् र तेल रोज्नुहोस् ।
२) ड्राई अर्थात् सुक्खा कपाल छ भने नरिवलको तेल लगाउनु राम्रो हुन्छ । नरिवलको तेलले कपालको सुक्खापन कम गराएर नरम बनाउन भूमिका खेल्छ । मुख्यतः कलरिङ गरिएको कपाललाई नरिवलको तेलले फाइदा गर्छ । किनभने, यो कपाल सुक्खा हुन्छ ।
३) कलरिङ नगरिएको कपाल पनि ड्राई हुन्छ । नर्मल ड्राई कपालमा ओलिभ र तोरीको तेल लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
४) ड्राई नभएको नर्मल कपाललाई बिग्रिन नदिन तथा स्वस्थ राख्न पनि तेल लगाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । हप्तामा एक–दुईपटक नर्मल कपालमै पनि आयल मसाज गर्नु फलदायी हुन्छ । नर्मल कपालका लागि आलमोन्ड आयल उपयुक्त हुन्छ ।
५) कपालको क्वालिटीअनुसार तेल रोजेर मात्रै पुग्दैन । कपालमा तेल कति समय राख्ने भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । स्काल्प बढी ड्राई भएका व्यक्तिले रातभर कपालमा तेल राखेर भोलिपल्ट बिहान नुहाउँदा ठीक हुन्छ ।
६) टाउकाको छालामा कुनै समस्या छ, माइग्रेन छ भने रातभर तेल लगाएर छाड्नुहुँदैन । यसले नकारात्मक असर गर्न सक्छ । खास त टाउको दुख्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
७) सामान्यतया तेल लगाएको दुई–तीन घन्टासम्म रहन दिएर टाउको पखाल्दा पर्याप्त नै हुन्छ । यो जुनसुकै प्रकृतिको कपालमा पनि लागू हुन्छ ।
८) धेरै तातो तेलले कपालमा मसाज गर्नुहुँदैन । तेल राम्रोसँग तताउने, तर मनतातो बनाएर लगाउनुपर्छ । तातो तेलले कपालको जरा कमजोर बनाउने तथा कपाल नै फेड गराइदिन्छ ।
९) नुहाउनुअघि टाउकोमा मसाज गर्न बाक्लो खालको तेल लगाउनुपर्छ । कपालको जरैसम्म भिज्ने गरी औँलाले खेलाउँदै तेल लगाउनुपर्छ । तेल लगाइसकेपछि महिलाले लामो कपाललाई हल्का पोको पारेर राख्नुपर्छ ।
१०) नुहाएपछि पनि कपालमा तेल लगाउने हो भने ननस्टिकी आयल रोज्नुपर्छ । नुहाएपछिको कपालमा पातलो खालको तेल आवश्यक पर्छ । यो वेला बाक्लो खालको तेल लगाउनुहुँदैन । बाक्लो तेल लगाउँदा बढी चिपचिप हुने र अनुहारसम्म लतपतिने हुन्छ ।
तेलसम्बन्धि केहि थप जानकारी :
स्वस्थ र सुन्दर कपालका लागि तेल लगाउन जरुरी रहेको छ । तेल लगाउने तरिका हुन्छ । कपालअनुसार फरक–फरक तेल आवश्यक पर्न सक्छ ।
सबै कपालमा सबै तेलको प्रयोग फाइदाजनक हुँदैन । तेलका कारण कुनै साइड इफेक्ट नभए पनि नतिजा सकारात्मक नदिएपछि तेल लगाउनुको अर्थ नै रहँदैन । त्यसैले सुरुमा आफ्नो कपालको क्वालिटी बुझ्नुहोस् र तेल रोज्नुहोस् ।
ड्राई अर्थात् सुक्खा कपाल छ भने नरिवलको तेल लगाउनु राम्रो हुन्छ । नरिवलको तेलले कपालको सुक्खापन कम गराएर नरम बनाउन भूमिका खेल्छ । मुख्यतः कलरिङ गरिएको कपाललाई नरिवलको तेलले फाइदा गर्छ । किनभने, यो कपाल सुक्खा हुन्छ ।
कलरिङ नगरिएको कपाल पनि ड्राई हुन्छ । नर्मल ड्राई कपालमा ओलिभ र तोरीको तेल लगाउनु राम्रो हुन्छ । ड्राई नभएको नर्मल कपाललाई बिग्रिन नदिन तथा स्वस्थ राख्न पनि तेल लगाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
हप्तामा एक–दुईपटक नर्मल कपालमै पनि आयल मसाज गर्नु फलदायी हुन्छ । नर्मल कपालका लागि आलमोन्ड आयल उपयुक्त हुन्छ ।
कपालको क्वालिटीअनुसार तेल रोजेर मात्रै पुग्दैन । कपालमा तेल कति समय राख्ने भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । स्काल्प बढी ड्राई भएका व्यक्तिले रातभर कपालमा तेल राखेर भोलिपल्ट बिहान नुहाउँदा ठीक हुन्छ ।
टाउकाको छालामा कुनै समस्या छ, माइग्रेन छ भने रातभर तेल लगाएर छाड्नुहुँदैन । यसले नकारात्मक असर गर्न सक्छ । खास त टाउको दुख्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
सामान्यतया तेल लगाएको दुई–तीन घन्टासम्म रहन दिएर टाउको पखाल्दा पर्याप्त नै हुन्छ । यो जुनसुकै प्रकृतिको कपालमा पनि लागू हुन्छ ।धेरै तातो तेलले कपालमा मसाज गर्नुहुँदैन । तेल राम्रोसँग तताउने, तर मनतातो बनाएर लगाउनुपर्छ ।
तातो तेलले कपालको जरा कमजोर बनाउने तथा कपाल नै फेड गराइदिन्छ ।
नुहाउनुअघि टाउकोमा मसाज गर्न बाक्लो खालको तेल लगाउनुपर्छ । कपालको जरैसम्म भिज्ने गरी औँलाले खेलाउँदै तेल लगाउनुपर्छ । तेल लगाइसकेपछि महिलाले लामो कपाललाई हल्का पोको पारेर राख्नुपर्छ ।
नुहाएपछि पनि कपालमा तेल लगाउने हो भने ननस्टिकी आयल रोज्नुपर्छ । नुहाएपछिको कपालमा पातलो खालको तेल आवश्यक पर्छ । यो वेला बाक्लो खालको तेल लगाउनुहुँदैन ।
Don't Miss it हाम्राे अनुहारमा बारम्बार एकै ठाँउमा किन आउँछ डण्डीफोर ?
Up Next राती कस्ता खाना खानु हुदैन ? कस्ता काम गर्नु हुदैन ? जान्नुहोस्
डण्डिफोर निचार्नुहुँदैन तरपनि निचार्छन्, फुटाउँछन् त्यसरी निचार्नु भनेको छालालाई अत्याचार गर्नु हो । के गर्ने त ? कसरी बच्ने डण्डिफोरबाट ?
जान्नुहाेस् किशमिशकाे पानी पिउनुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
किशमिशका दानालाई पानीमा २० मिनेट जति सानो आगोमा उमालेर रातभर राखेर खानाले शरीरमा उत्पन्न हुने बिभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ…